OLAM-PANAMBADIANA : Niakatra Fampanoavana ilay reny namono ny zanany
Vehivavy iray 30 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny BC5, ny Alatsinainy 20 janoary 2020 lasa teo rehefa avy nitsabo tena tao amin’ny HJRA noho ny resaka vono olona. 21 janvier 2020
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Polisim-pirenena. Nanomboka ny 12 janoary 2020 no tao amin’ny hotely iray teny amin’ny faritra 67ha iny ity ramatoa ity. Araka ny fantatra mantsy dia nisara-toerana efa ho 1 taona sy tapany izy sy ny vadiny, ka nipetraka tany amin’ilay rangahy ny zanany roa mirahavavy, 07 sy 10 taona.
Ny zoma 17 janoary 2020 tolakandro no naka ireo zanany mirahavavy ireo tany amin’ny rain-janany any amin’ny faritra Anjanamasina, Kaominina Anosiala, distrikan’Ambohidratrimo ity ramatoa ity. Rehefa azony ireo zaza ireo dia noentiny tao amin’ilay hotely tetsy 67ha. Ny alina, alohan’ny hatory no nomeny nuvan « 1flacon » ny zanany 10 taona, rehefa avy eo dia nokendainy tamin ’ny lamba kosa ilay zandriny 07 taona. Rehefa maty ireo zaza roa ireo dia nisotro toaka ary nampifangaroany nuvan « 1flacon » ihany koa izy mba hamonoany ny tenany. Ny maraina anefa dia nahatsapa izy fa tsy maty fa nalemilemy ny zavatra nosotroiny ka nila vonjy tamin’ireo tompona hotely hitondrana azy any amin’ny dokotera. Tsikaritry ny tompona hotely kosa fa efa tsy nisy aina intsony ireo zaza ka nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany izy ireo.
Tonga teny an-toerana kosa ny Polisin’ny CSP7 sy BC5 nijery ny zava–nisy, ilay ramatoa kosa dia efa nisy nitondra teny amin’ny hopitaly HJRA ary nanaraka fitsaboana. Rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ilay Ramatoa dia nosamborin’ny Polisy, omaly. Nilaza moa ilay Ramatoa fa tsy tiany hipetraka miaraka amin’ny rainy intsony ireto zaza ireto ary izay no nahatonga azy hamono ny zanany ary koa hamono ny tenany fa tsy zakany ny hahita ny zanany ho faty. Natolotra ny Fampanoavana omaly ity raharaha ity.